UTİKAD Summit 2019 wuxuu u Wareejiyay Qeybta Saadka | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulUTİKAD Zirve 2019 Wuxuu u Wareejiyay Qeybta Saadka
16 / 10 / 2019 34 Istanbul, tareenka, hawlaha, GUUD, Xarumaha Saadka, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Shirkii utikad wuxuu beddelay waaxda saadka
Ururka Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee loo yaqaan (UTİKAD), sida sanadkii la soo dhaafay, sanadkaan 'Iftiinka ifaya mustaqbalka' wuxuu saxiixay dhacdo muhiim ah. 10 Oktoobar 2019 Shirkii UT whichKAD ee Khamiista loo qabtay oo loogu talagalay mawduuca 'Isbeddelka Isbadelka' ayaa lagu dhammeystirey xiisaha weyn ee loojistikada iyo qaybta silsiladda saadka.
Magacyo karti leh iyo hogaamiyaasha wershadaha, min digitalka ilaa dhaqaalaha, tikniyoolajiyadda ilaa jawiga, waxay la wadaageen kaqeybgalayaasha iyo aragtidooda ka qeyb galayaasha maalintii oo dhan.
Shirka UTİKAD Shir-weynaha 2019-Isbeddelka Isbeddelka ayaa isu keenay dunnida ganacsiga iyada oo ay ka soo qaybgalayaashii shirkadda 'Cargo Turkish' ay tahay 'Maal-galinta Dahabka ah', Rugta Ganacsiga ee Istanbul iyo Turkcell's 'Bronze sponsoor', İMEAK Chamber of Shipping and SOFT Bilişim as 'Sponsoor Support'. .
UTİKAD waxay isu keentay magacyadii hormuudka ka ahaa duubabka iyo hogaamiyaasha warshadaha iyo sidoo kale agaasimayaasha shirkadaha ganacsiga ee xiiseynaya isbedelada dhijitaalka ah ee Shirweynaha Isbedelka Dwardüşüm Forward'n. Kalfadhiyada maalintii oo dhami waxay diirada saareen isbeddelka nolosha ganacsiga, gaar ahaan saadka, iyo saadaalinta la wadaago ee mustaqbalka.
Ciyaaraha khabiirka ah ee nashqadeynta barashada Nurşah Yılmaz wuxuu ahaa bilow fiican iyadoo kulanka ugu horeeya ee Gudoomiyaha UTİKAD Emre Eldener uu la kulmay kaqeyb galayaasha. Emre Eldener, gudoomiyaha UTİKAD, oo isagu marti galiyay shirkan, ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay marti galinta xaflad iftiimin doonta waaxda saadka iyo ganacsiga ganacsiga wuxuuna yiri: Meelo cusub oo ganacsi iyo qaabab ganacsi loo sameeyo ayaa soo socda. Si loo badbaadiyo, waxaan u baahan nahay inaan awoodno inaan maareyno isbeddelkan oo aan is-dhexgalno. Waxaan aaminsanahay in soojeedinta iyo fikradaha shirkan ay fikrad ka dhiiban doonaan mustaqbalka .. Khudbadda furitaanka ee shirweynaha waxaa sameeyey İlker Aycı, Guddoomiyaha Ururka Dhoofinta Adeegga, oo sidoo kale ah Madaxweynaha Shirkadda Diyaaradaha Turkish. Khudbaddiisa, Aycı wuxuu ku sheegay in waddamadu ay hadda galayaan xilli ay ku tartamayaan silsiladda sahaydooda. Tani waxay ka dhigeysaa qaybta logistics-ka inay udub dhexaad u tahay ganacsiga adduunka. Sidaa darteed, annaga oo ah Ururka Dhoofiyayaasha Adeegga iyo Shirkadda Diyaaradda Turkish, waxaan saarnay saadka xarunta qorshaheena istiraatiijiyadeed. ”
AĞ AYAAN AAN AHAAN HADDII SADDEXAAD AADAN DHALASHADA AIR ”
Mabda 'ayaa sheegay in gaadiidka xamuulka hawada Turkey ee dekedda suuqa dekedda gaadhay $ 3 billion Aycı, isagoo intaa ku daray qiimaha suuqa ee adeegga ayaa sidoo kale xusay in gadaal 5 billion dollars. suuqa xamuulka hawada Turkiga, annaga oo ogaaney in Turkish xamuulka leeyahay saamiga ugu weyn ee saddexdii sano ee la soo dhaafay 80 koritaanka boqolkiiba, "24 86 raxan xamuulka diyaaradaha ee dalkeenna sii kordheysa heshay horyaalka ee dalalka ugu shirkadaha diyaaradaha ee dunida. Xamuul xagga hawada ah, waxaan ka soo kacnay 13 adduunka oo aan uga gudubnay 7. Hadafkayagu waa inaan galno 5 ugu horreeya, ka dibna kii ugu horreeyay ee 3. Waxaan higsaneynaa inaan ka mid nahay saddexda buundo ee ugu sareeya hawada. ”
Aycı, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha ee THY iyo HIB, wuxuu ku casuumay shirkadaha lojistikada inay ku midoobaan saqafka sare ee HIB wuxuuna ka codsaday inay gacan ka geystaan ​​xoojinta midowga midowga adduunka.
Z WAA INAAN SAMAYN KARO Jaangooyooyinka Nidaamka Guud ”
Khudbadihii furitaanka kadib, shirku wuxuu ku socday sheekooyin sheeko xariir ah iyo sheeko-sheeko-sheeko iyo daaweeye farshaxan Judith Liberman. Khudbadiisa, ayuu Liberman wuxuu ku nuuxnuuxsaday saameynta sheekooyinka cirro iyo mala-awaalka halka dunida maanta ay tahay, wuxuuna yiri in si noloshu u waara tahay, qof walbaa waa inuu u furnaado wadaagista. Sheekada Liberman ee ku saabsan waaxda lojistikada ayaa dhagaystayaasha si weyn uga heshay.
Guddiyada galabta ee shirweynaha, Blockchain, Sirdoonka Artificial iyo Isbadal dijital ah ayaa laga wada hadlay. Iyada oo ay weheliso Blockchain, mustaqbalka geeddi-socod iibsi sahlan, raad raadin iyo rakhiis ah ayaa la adkeeyay waxaana la adkeeyay in waaxaha oo dhan lagu beddeli doono nidaam sirdoon macmal.
Guddigii ugu horreeyay ee Shir-madaxeedka wuxuu ahaa Isbadal Burbur leh: Blockchain, Block waxaa dhexdhexaadiyay Ahmet Usta, qoraaga buugga "Blockchain 101". Adeegga Macaamiisha Maersk Turkey General Manager Allow ÒNebiga Day iyo IBM Hogaamiyaha Technology Turkey ee uu goluhu in Sevilay Kurt ka qaybgalay sida ku hadla, qaabab muhiim ah oo software ecosystem blockcha, maaliyadda, sida ay u saamayn by horumarinta nidaamo kala duwan sida logistics, ayaa looga hadlay sida loo diyaariyo isbeddelka iyo Isbadal this of warshadaha ee logistics.
Hogaamiyaha Technology IBM Sevilay Kurt Turkey, Aynu ka soo qaadno in macaamiisha aysan ku qanacsaneyn adeegeena. Waxay si fudud u beddeli karaan adeegga ay helaan. Nidaamku waa inuu la socdaa isbedelka. ” Adeegga Macaamiisha Maersk Turkey General Manager Allow ÒNebiga In maalinnimadii, “Geedi socodka isbadalka warshadaha wali waa socdaa. Shabakadda dukumintiga ayaa aad u ballaaran macaamiishana waxay u baahan yihiin inay awood u yeeshaan inay maareyn karaan hanaankan. Waxaan u baahanahay inaan dejino hanaannada murugsan .. Ahmet Usta, qoraa Blockchain 101, wuxuu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in hal talaabo laga hormariyo adduunka ganacsiga halkaas oo uu jiro tartan weyn.
Af-hayeenada ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay in shirkadaha waaweyn ee ku tartamaya suuqa ay iska kaashadeen isla goob si ay sifiican uga faa iidaystaan ​​tikniyoolajiyada 'Blockchain'. In kasta oo isbedelka dijitaalka ah ay kujirto hanjabaado iyo fursado, haddana waxaa hoosta laga xariiqay in waaxaha iyo sidoo kale hay'adaha ay ku guuleysan karaan isbadal dijital.
BO WAA INAAN KA FURIN FURSADAHA MARKA AYAA LA BILAABAY KHATARTA ”
Dr. Serdar Kuter wuxuu dhexdhexaadiyay Maamulaha Dhaqaalaha ee Habertürk wuxuu dhexdhexaadiyay "Dhaqaalaha wareegga Dhaqaalaha (in)" oo ah af-hayeen kaqeybgalay guddiga. Murat Kubilay, sameeyey bandhigga a on view hadda dhaqaalaha Turkiga. Dr. Murat Kubilay, warshadaha wax soo saarka adduunka ee waa in hoos u dhac, maal-gashadayaasha ajnabiga jiidin karo dhaqaalaha iyo deynta oo ka mid ah dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee Turkey ayaa sheegay in ay u kordhiyaan. Dr. Kubilay wuxuu raaciyay inay lagama maarmaan tahay in la tixgeliyo suurtagalnimada xiisadda dhaqaale 2020 inta lagu gudajiro qorshooyinka.
“BAARITAANADA DIGITALKA WAA LAGU DALBADAN KARAA LATALKA LUUQADA ugu wanaagsan”
Professor Dr. Gudiga Isbadalka Dijital ah ee Dönüşüm ee Saqafka Sahayda "oo uu dhexdhexaadiyay Okan Tuna, waxaa lagu nuuxnuuxsaday in waaxda sida ugu wanaagsan u hirgalin karta isbadal dijital ah ay tahay saadka, dhowaanna waxaa lagu nuuxnuuxsaday inay jiraan tusaalooyin wanaagsan oo tan ah. Maareeyaha Saadka Saamiyada ee Turkcell Ömer Faruk Erkal wuxuu ka qeybgalay guddiga isagoo ah af-haye; Wuxuu la wadaagay mashruucyadiisa digitalka Turkcell. Erkal wuxuu raaciyay in dhamaan howlaha shirkada gudaheeda lagu fulinayo codsigan. Marti kale oo ka tirsan guddiga ayaa ahaa Cusmaan Selçuk Sarıoğlu, Qorsheynta Soosaarka ee Ford Otosan iyo Maareeyaha Xakamaynta. Isagoo sheegay inay ku jiraan isbadal wanaagsan, Sarıoğlu wuxuu yidhi; Ku qanacsanaanta macmiilka M ourteri waa daneynteena koowaad. Digitiiniddu sidoo kale waa waxyaabaha ugu sareeya ee macaamiisha laga filayo. Waxaan qorsheyneynaa qorshayaashayada oo dhan sida ugu habboon.
Y SAY AAD UGU FUDUD EE MACLUUMAADKA BAADHITAANKA DIGITAL
Hogaamiyaha Isbadalka Dijitaalka iyo aqoonyahan Kozan Demircan wuxuu la kulmay kaqeyb galayaasha Ner Xagee Isbadalka Sirdoonka ee Artificial? Soo bandhigidiisa, Kozan Demircan wuxuu carrabka ku adkeeyay doorka ay ka ciyaarayaan sirdoonka macmal wax ka bedelka. Isagoo hoosta ka xariiqay in shirkadaha aan lahayn khariidad waddo dhijital ah ay darbiga ku dhufan doonaan, Demircan wuxuu yidhi, te Geedi socodkan, asaasidda hababka go'aanka saxda ah iyo habeynta xogta shirkadda.
iibintu waa muhiimad weyn. Teknolojiyadda farshaxanka ee farshaxanka leh ee lagu taageeray teknolojiyada 'blockchain technology' waxay bilaabi doontaa xilligii dhoofinta dhoofinta micro iyo isweydaarsiga badeecada ku saleysan crypto waxay noqon doontaa ajandaha. Demircan wuxuu sheegay in ilaa 2021, robots ee qeybta saadka ayaa la rajeynayaa inay abuurto suuq 22,4 bilyan oo doolar.
Kalfadhigii ugu horeeyey ee shirwaynaha waxaa dhexdhexaadiyey Madaxweynaha UTİKAD Emre Eldener. Tamarta Kıran, Gudoomiyaha Gudiga Agaasinka ee ChamMEAK Rugta Ganacsiga, Turhan Özen, Kuxigeenka Maamulaha guud ee Cargo iyo Fuat Pamukçu, Kuxigeenka madaxa DFDS iyo Gudoomiyaha Ururka Ganacsatada Da'yarta ah ayaa nala joogay.
Emre Eldener, Madaxweynaha UTİKAD, wuxuu sheegay in waaxda ay si dhakhso ah isu beddeshay isla markaana UTİKAD, ay ka mid tahay howlaha ugu muhiimsan in la ogeysiiyo waaxda isbedeladaan iyo horumaradaas oo sagxadda uga tegay dadka hadla.
Madaxweynaha DTO Tamer Kıran, oo qaatay eraygii ugu horreeyay ee kalfadhiga, ayaa sheegay in kuwa aan ku sameyn karin dheef-tirista waaxda badda in laga saari doono ciyaarta sida waaxaha oo dhan. Isagoo sheegay in waaxda badda ay sidoo kale qayb ka heshay tikniyoolajiyadda iyo dheefshiidka, ayuu yidhi Kıran, içerisinde Sannadkan, maraakiibta ismaamula ee madaxabanaan waxay bilaabeen inay xamuul qaadaan badda dhexdeeda. In kasta oo ay ku bilaabmayso masaafado gaagaaban oo gaagaaban markii hore, tani waa horumar aad u muhiim ah marka la eego noqoshada tillaabada koowaad ee ganacsiga. Sababta oo ah maraakiibta iskood u madax banaan ayaa leh qalab sirdoon oo macmal iyo internet ka ah walxaha, waxay saadaalin karaan qatarta qaar aan la arki karin bini-aadamka waxayna u digayaan. Markaan u maleyneyno in 75 ay tahay mid ku saleysan aadanaha, waxaan aaminsanahay in otomatiga iyo sirdoonka macmalka ah ay si weyn u yareyn doonaan tirada shilalka suurta galka ah ee badda ka dhaca. Waa macquul in la yiraahdo xaaladdani sidoo kale waxyar ayay yarayn doontaa shaqaalaha xoogga. ”
“BADBAADADA CARBER WAA IN AAN LAGU XIRAN Z
Isagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda amniga cyber-ka maadaama ay kordhisay tirada aaladaha ku xiran internetka ee waaxda badda iyo sidoo kale qeybaha kale ee badan, Tamer Kıran wuxuu yiri, konteyner Muddadii ugu dambeysay, howlgalka kontaynarrada ee shirkad caalami ah oo muhiim u ah kontaynarrada kombuyuutarrada ayaa waxaa sababay jabsadayaasha kombiyuutarka. Shirkadda waxay ahayd inay joojiso dhammaan howgallada si looga baxo xaaladdan. Marka la beddelayo nidaamyada, mararka qaarkood waa lagama maarmaan in taxaddar la sameeyo iyada oo la tixgelinayo khataraha aan la qiyaasi karin. ”
"Aan yara yaraa, muddadii waa dhammaatay"
Tamer Kıran wuxuu tilmaamay in dhaqalaha miisaankoodu ay muhiimad weyn ku yeelan doonaan nidaamka cusub ee dhaqaalaha. Habka lagu gaari karo awoodaha waaweyni waa is dhexgalka iyo iskaashiga. Waxaad haysan doontaa in ay iskaashi si ay u noolaadaan ama in ay ku milmaan ", isagoo leh logistics door hogaamineed ka ganacsiga Turkey-US ciyaari kara, ayaa sheegay in erayada soo socda:" America ayaa ku allabaryi Shiinaha sida loogu uma oggolaan doono in koritaanka dheeraad ah. Turkey-US 100 billion dollars in credits ganacsiga iyo bartilmaameedyada mudnaanta loo aqoonsaday waaxda 12. Mid ka mid ah waaxdani waa saadka. Mareykanka wuxuu ku iibsadaa tiro aad u badan qeybo badan. Kaabayaasha saadka ee alaabtan ku qaadi kara dhaqaala ahaan isla markaana dhaqso u baahan in la sameeyo. Markan, dhoofiyeyaasha waxay kaloo u baahan yihiin inay taageeraan shirkadaha saadka ee Turkiga. ”
BADBAADADA BADAN 80 EE TURKISH CARGO LOADS… ”
gaadiidka Transit ee Turkey iyo bilaabay hadalka adigoo adkaynaya doorka siiyey ciyaaray by Turkish Airlines xamuulka-xigeenka Agaasimaha Guud ee Turhan Ozen, dakhliga xamuulka Turkish kaliya yimid dhoofinta Turkey iyo soo dejinta ee boqolkiiba xnumx ee, ayaa sheegay in laga helay gaadiidka transit ah boqolkiiba 20 . Waxa uu sheegay in ganacsiga shisheeye Turkey ee Ozen u dhaqaaqi doono ilaa boqolkiiba xnumx'y sannadaha soo socda, "innagu waynu kacnay in gaadiidka xamuulka hawada laga bilaabo wakhtiga xnumx'üncülük gaaban ee kala sareynta xulalka adduunka ee xnumx'nc safka. Saamiga aan hadda ka helno suuqa caalamiga ah waa boqolkiiba 90 ee 80, waxaanan ka mid noqon doonnaa shanta ugu sareysa annagoo ku kordhinayna 12. ” Khudbaddiisii, ayuu Özen ka hadlay horumarka gaadiidka xamuulka xamuulka qaada iyo garaaca kobaca ee Turkish Cargo wuxuuna yidhi:
Ik Waxaan ku kordhinay tirada diyaaradaha xamuulkeena ah ilaa 24 anagana waan u kordhinaynaa xitaa intaa ka sii badan. Waxaan ku gaarnaa 88 diyaaradda xamuul. Tani waa tirada ugu badan ee meelaha safarka xamuul xamuul. Meelaha udub dhexaadka ah ee xamuul xamuul caalami ah oo la yiraahdo Turkish Carpet ayaa soo mara dalkeena. 126 Waxaan leenahay shabakadda hawada ee saddexaad ee dunida ugu weyn, waxaan gaarnaa tirada ugu badan ee duulimaadyada adduunka iyada oo loo duulayo xNUMX duulimaad ee waddanka. Waa macquul in sedex ama la quudiyo suuqaas iyadoo la abuurayo ama la horumarinayo suuqyada jira. Waxaan nahay afaraad ee tilmaamaha xiriirinta garoonka diyaaradaha ugu sareeya adduunka. Waxaan aragnaa inaan ka mid noqon doonno shanta ugu sarreysa adduunka marka la eego gaadiidka xamuul qaada oo la raaco garoonka diyaaradaha Istanbul. Iyada oo kaliya toddobo saacadood oo duulimaad ah, caasimada 319 iyo suuqa boqolkiiba 60 laga heli karo Istanbul. ”
"SHAQADA AIRPORT CARGO terbaru waxay noqon doontaa mid iska daaya"
Turhan Özen wuxuu sheegay in garoonka diyaaradaha Istanbul uu noqon doono kan ugu weyn adduunka marka laga hadlayo xamuul xamuul. Waxaan u wici doonnaa garoonkan xamuulka ah ee Smartist. Halkan waxaan ku diyaarin doonnaa aalado robotic otomatik ah. Ku samaynta kuwan robots waxay gacan ka geysan doontaa qaybta logistics marka loo eego xawaaraha, tayada iyo qiimaha. Teknolojiyad kale waa tikniyoolajiyado la isku qurxin karo; gaar ahaan muraayadaha indhaha ee dhabta ah. Daraasado tijaabo ah ayaa socda waxaana bilaabeynaa inaan ku hirgalinno sannad gudihiis ”.
SIYAASADDA E-ISBATALKA EE WAA INUU Kordhin doonaa 9 FLOOR ”
Explainedzen wuxuu sharraxay aragtida ugu weyn ee xamuulka Cargo ee dalka Turkiga ee dhoofinta iyo soo dejinta sida gelitaanka suuqyada horumarinta, wuxuuna yiri, kullanarak Waxaan hiigsaneynaa inaan siinno fursadaha ay ku habboon tahay dalkeenna anagoo adeegsanayna miisaanno miisaan leh. Ujeeddadan darteed, waxaan la shaqeyneynaa shirkadaha logistic si aan u dardargalino hormarka suuqyada. ” Isaga oo leh ganacsiga e-commerce ayaa ah awoodda ugu weyn ee ganacsiga adduunka xilligan, “e-commerce-ka ayaa saddex-jibbaar ka dhigey Turkiga Cargo. Waxaan rajeyneynaa inaan gaarno dabaqa 8-9 waqtiga soo socda. ”
Özen waxa kale oo uu ka hadlay iskaashiga ay la leedahay shirkadda Shiinaha ee 'WeWorld Express' oo uu sheegay in shirkaddu ay hadda bixinayso adeegga albaab-ka-albaab ee waddanka 15. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya inay shirkaddu isku dayeyso inay wadamo cusub ku darto shabakaddan adeegga, Turhan Özen wuxuu sheegay in iskaashigan iyo ballaarintiisa ay fursad u siinayaan ganacsatada Turkiga inay ka faa'iideystaan.
ILAALINTA KU SAABSAN HALISTA WADAJIRKA EE INNOVATION WAA INTA LAGU SAARO DIIWAANKA ”
Hadalkii ugu dambeeyay ee kalfadhiga wuxuu ahaa Fuat Pamukçu, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimeyaasha Ururka dhalinyarada Ganacsiga-dhalinyarada. 30 wuxuu xasuustaa in faa iidada shirkadihii ugu horreeyay ee adduunka ee 25 ay la mid ahaayeen isla markaana celceliska 10 sanad ka hor. Pamukcu, boqolkiiba 45 macaashka miiska maanta, isagoo sheegaya in isbeddelka uusan la qabsan karin isla markaana uusan si fiican u qaban karin liiska wuxuu dib ugu noqday culeyska.
Miyaad ka dhigi kartaa hal abuurnimo iyo isbadal dijital ah shirkadaha? Markii la weydiiyay, Fuat Pamukçu wuxuu sheegay in kaliya boqolkiiba 20 jawaabaha la heli karo, “Teknolojiyaddu si dhakhso leh ayey u socotaa. Waxa loo baahan yahay in la sameeyo ayaa ah in la sii wado isbadalkan. Laakiin isbeddelka dhabta ahi wuxuu ku jiraa maskaxda dadka halkii uu ka tegi lahaa teknolojiyadda. Markii tikniyoolajiyaddu ay si dhakhso leh u socoto, la qabsiga tikniyoolajiyadda ayaa sii dardar gashay. Urur kastaa waa inuu helaa midka ugu habboon isla markaana horumariya dhaqanka isbeddelka. Waxaa jira shirkado badan oo xiro maxaa yeelay ma sameyn karaan isbadal dijital ah. Lix ka mid ah shirkadaha ugu dhaqsaha badan 10 waa shirkado tikniyoolajiyadeed. Maaha daba gal wax soo saar cusub, laakiin qabashada hogaanku waa isbadal horay u socda. ”
Qoraaga tikniyoolajiyada iyo ugaarsiga isbeddelada Serdar Kuzuloğlu wuxuu la kulmay kaqeybgalayaasha 'Otherte Side Side of Technology'. Uz Maxaa inaga sugaya dhinaca kale ee teknolojiyadda? Sidee teknolojiyadda iyo isbeddelka hay'adaha iyo shaqsiyaadka ay u dhici doonaan? Muxuu yahay nidaamka adduunka cusub iyo siyaabaha lagu badbaadin karo? Uz oo leh soo jeedin u gaar ah Kuzuloğlu wuxuu ku nuuxnuuxsaday qiimaha lagu daray isbedelka dijitaalka ah ee adeegyada saadka.
SHAQAALAHA LAR 2025 75 SHAQAALAHA AYUU KA BILAABINAYAA 35% EE SHAQADA XNUMX ”
Mid ka mid ah fadhiyadii ugu dambeeyay Shirweynihii Dönüşüm Forward Transformation Summit ”ayaa lagu qabtay dhexdhexaadinta Tuğba Çanşalı, aasaasaha iyo khabiirada barashada ee naqshadeynta barashada. Guddi xaqiiqsaday; Serkan Gür, Agaasime kuxigeenka Wasaaradda Waxbarashada Qaranka ee Istanbul, Berna Öztınaz, Gudoomiyaha Gudiga Agaasinka ee PERYÖN iyo kuxigeenka Maareeyaha Guud ee Hay'ada Xuquuqda Aadanaha ee Defacto. Agaasimaha Gobolka Istanbul ee Caawiyaha Waxbarashada Qaranka Serkan Gur, isbadal weyn oo ku yimid jiilka isbadelka ayaa carabka ku adkeeyay. Khudbadiisa, Serkan Gür wuxuu ka hadlay Model-ka Iskuulada Istanbul-School Model wuxuuna cadeeyay inay la saxiixdeen UTİKAD borotokool iskaashi ah. Serkan Gür wuxuu sheegay in ururada waaxyaha iyo shirkadaha ay tahay inay gacan ka geystaan ​​horumarka ardayda iyo sidoo kale ardayda oo ay u furan yihiin iskaashi iyo taageero nooc kasta ah sida Agaasinka Gobolka ee Waxbarashada Qaranka.
Turkey Dadka Management Association (PERYÖN) Guddoomiyaha Guddiga ka koobnaan doonaan dad da'yar oo sidoo kale sheegay in Berne Öztınaz In 2025 75 ee da'doodu ka yar tahay shaqaalaha iyo boqolkiiba 35 dalka Turkiga, waxa uu sheegay in dadka dhallinyarada ah waxay u baahan yihiin in si sax ah loo qeexay. Isagoo hoosta ka xariiqay in logistics iyo tafaariiqda tafaariiqda ay ka mid yihiin waaxaha aysan dhalinyarada dooneynin inay la shaqeeyaan, Öztınaz ayaa yidhi, için Si loo beddelo aragtidan, waaxaha, shirkadaha waa inay adeegsadaan awoodda warbaahinta bulshada, inay gaaraan jiilka cusub oo ay naftooda u sheegaan si sax ah.
LOOGU TALAGALAY MUWAADINIMADA MUHIIMKA AH EE LACAG LA'AAN EE Gaarsiinta gaajada adduunka ”
Shirkii ugu dambeeyay ee shirku wuxuu ahaa "mustaqbal Livable .. Xubin ka ah Kuliyadda Jaamacadda Bogazici iyo Aqoonyahan Cimilada. Dr. Levent Kurnaz SDSN la Isuduwaha Turkey Özay Spring Tababarka, Sustainable meesha United Nations Development Program-UNDP ee Horumarinta wadaago ay u socdeenna.
Golaha ayaa cadeeyay in saadka uu muhiimad weyn u leeyahay dhamaadka gaajada adduunka, waxaa lagu nuuxnuuxsaday in xalka loojistikada wali looga baahan yahay wax soo saarka iyo cunida iyo gaarsiinta cuntada macaamiisha iyada oo aan wax la dhimin.
Shirkii UTİKAD wuxuu ku dhammaaday 'sawirkii qoyska' oo la qaaday kadib markii la dhammeystiray golayaasha isbeddelka ee loo gudbiyay 2019-Forward.
UTİKAD Madaxweynaha Eldener: “waaxda saadka ee ATLAS…
Fadeexad ka dhalatay Iran
Sidee ayay cunaqabatinka Iran u saameeyaa waaxda saadka?
Lufthansa Cargo Roobka Abaalmarinta ee UTİKAD iyo xubnaheeda
Qeybta Saadka ee Saadka
Gaziray Stations Commuter iyo Dhismaha Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare